Dowladda Soomaaliya oo taageertay mid ka mid ah shiraraka iska horjeeda ee Baydhabo (War-murtiyeed) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo taageertay mid ka mid ah shiraraka iska horjeeda ee Baydhabo (War-murtiyeed)
A warsame 3 March 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u cadeysay mowqifka ay taagan tahay labo shir oo iska soo horjeeda, kuwaasoo muddo ka socday magaalada Baydahbo.
Labada shir mid ka mid ah waxaa lagu dhisayaa maamul ka kooban 6 gobol oo kala ah: Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo, halka shirka kale lagu dhisayo maamul ka kooban 3 gobol oo kala ah: Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Haddabada dowladda Soomaaliya ayaa manta sheegtay iney gacan ka geysaneyso shirka lagu dhismayo maamulka 3-da gobol.
Warka kazoo baxay wasaaradda ayaa kusoo beegmay xilli qolada wadda shirka 6-da gobol ay doonayaan iney maanta qabtaan doorashada madaxweynaha maamulkaas.
War-murtiuyeedka kazoo baxay wasaaradda Arrimaha gudaha & Federaalka Soomaaliya ayaa u qornaa sidan:
DOWLADDA FEDERAALKA AH EE SOOMAALIYEED
WASAARADDA ARRIMAHA GUDAHA IYO FEDERAALKA
Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Federaalka waxay u xilsaarantahay hirgelinta iyo Taabagelinta Federaalaynta dalka si waafaqsan Dastuurka iyo shuruucda maamul- u-samaynta gobolada iyo degmooyinka dalka. Sidoo kale, waxay u xilsaaran tahay ka hor tegidda khalalaasa siyaasadeed oo dhalin Kara iska hor imaad bulsho.
Waxaa xusid mudan in mudooyinkan dambe ay magaaladda Baydhabo ee Gobolka Bay ka socdaan shirar xambaarsan fikrado iska soo horjeedo, kuwaas oo uu mid waliba sheeganayo dhisidda Maamul-­‐Goboleed ay yeeshaan degaanadaasi.
Hadaba Xukuumaddu waxay wal-­‐wal ka muujinaysaa habka ay u socdaan shirarkaas iyo dhibaatada ka imaankarta natiijada dhamaadka shirarkaas iska soo horjeeda.
Dawladda Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyada oo ka Duuleysa mas’uuliyada ka saran maamul u sameynta iyo federaaleynta Dalka waxay dhawr jeer isku taxaluujisay in ay midayso shirarkaas iska soo horjeeda, si shacabka degaankaas ay u helaan maamul midaysan oo waafaqsan Dastuurka iyo Shuruucda dalka u yaala.
Xukuumaddu iyadoo ka hortagayso arrintan kor ku xusan, waxay dhawr jeer wufuud kala duwan oo ka kooban xubno ka kala socda labada gole ee Xukuumadda iyo Barlamaanka u dirtay magaaladda Baydhabo.
Wufuudaas waxay u xilsaarnaayeen in la helo talo mideeyaan oo ku aadan maamul u samaynta iyo federaalaynta deegaanadaasi.
Hadaba, Wasaaraddu waxay halkan ku caddaynaysaa moowqifka siyaasadeed ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan qaabka loo marayo dhismaha Maamul-Goboleed ay yeeshaan goboladaas, iyadoo la tixgelinayo waaqiciga siyaasadeed ee haatan ka jira degaanadaas.
1. Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa dhammaan siyaasiinta iyo cuqaasha Dhaqanka ee dalka in ay ku baraarugsanaadaan maamul u samaynta Goboladda, Degmooyinka iyo Maamul Goboleedyada si waafaqsan Dastuurka iyo Shuruucda Dalka.
2. Xukuumaddu waxay dhawraysaa heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa, Ethiopia ee lagu ogolaaday dhismaha Maamulka Ku-Meelgaarka ah ee Jubba.
3. Xukuumaddu waxay beegsanaysaa ku dhaqanka heshiiska Addis Ababa ee kor ku xusan. Sidoo kale, wixii tabasho ah ee ku saabsan heshiiskan Xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay gacan buuxda ka geeysato.
4. Xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay gacan ka geeysato dhismaha Maamul Goboleedka sedexda gobol ee Goboladda Bay, Bakool iyo Shabeeladda Hoose.
5. Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas in ay ka fogaadaan wax walba oo halin kara xasilooni daro ku timaada degaankaas.
Amisom oo ka xun askar gaar ah oo Uganda u disreyso ilaalinta xarrumaha UN-ka ee Muqdisho
somalia:Al-Shabaab orders El-der-Mareeg residents to pay $ 100,000